Tsidiho Haninge - Hetsika sy zavatra tokony hatao any Haninge
Momba ny fitsidihana haninge
Ho an'ny mpikambana
Tsy manana hetsika ao amin'ilay lisitra ianao.
Drafitra harato tao Frönäs, Gålö 28 Mey tamin'ny 11 ora maraina
Jereo, ataovy ary andramo
Naturpasset sy Cykelpasset - Miala amin'ny natiora ary andramo ny orienteering
Mianara sambo any Dalarö
Miantsena sy miantsena
Boaty hena miaraka amin'ny hena voaangona voajanahary avy any amin'ny toeram-pambolena Tyresta
Fonenana sy fonenana
Quality Hotel Winn - Mijanona mandritra ny alina eo akaikin'ny faritra ivelan'i Rudan mahafinaritra
Mametraha torolàlana any Tyresta - velona ao amin'ny ala mua ny fahafatesana
Jereo & Ataovy
Any Haninge dia misy toerana fivarotana maromaro. Ny ivon-toeram-pivarotana lehibe indrindra, foibe Haninge, dia manana fivarotana maro be. Ny iray hafa dia ny Port 73 eo amin'ny fidirana mankany Haninge miaraka amin'ny i.a. Coop Forum sy fivarotana misy marika malaza. Fanariana vato iray any dia misy fivarotana maro toa an'i ICA MAXI sns .. Ivotoerana fiantsenana kely kokoa dia any Västerhaninge sy any Brandbergen.
Tapaka ny loha
Any amin'ny faran'ny faritry ny ranomasina lavitra indrindra dia ny Huvudskär Archipelago ary iray amin'ireo tahirin-javaboary Haninge. Misy nosy, cobs ary skerry 200. Ao amin'ny Ålandsskär, tanàna fanjonoana manomboka amin'ny Moyen Age, dia misy tranobe. Tullhuset dia trano fandraisam-bahiny ankehitriny, ao amin'ny trano mpanamory dia misy fampirantiana momba ny tantaran'i Huvudskär. Avy amin'ny jiro ianao dia manana fomba fijery mahafinaritra. Ny Foundation Archipelago dia mitantana ny nosy sy ny Hostel. Waxholmsbolaget dia miasa Huvudskär amin'ny alàlan'ny Fjärdlång avy any Dalarö 3 andro isan-kerinandro T / R amin'ny fahavaratra.
Ao Utö dia misy iray amin'ireo toby fitobiana tsara indrindra ao amin'ny nosikely. Eo akaikin'ny ranomasina, miaraka amin'ny fahitana tsara ny seranan-tsambo atsimo sy Mysingen - ary ny morontsiraka fasika izay tena akaiky azy akaikin'ny toby! Ny tranoben'ny toby dia misy trano fandraisam-bahiny misy trano fidiovana, fandroana ary toerana kely misy hotplates. Ny tobim-pilasiana dia maodely ivelany ary tsy misy isa misy isa, noho izany ny olona dia tsy mila mamandrika toerana. Ny kilasy sekoly sy ny tarika lehibe kokoa kosa dia mila mamandrika mialoha. Ho an'ny famandrihana sy fampahalalana dia mifandraisa amin'i Hamnboden amin'ny telefaona: 08-501 57 450
Ao amin'ny Castle Häringe dia afaka miaina toy ny mpanjaka ianao. Na maninona raha toy ny kintan'ny sarimihetsika ao amin'ny efitranon'i Greta Garbo irery, amin'ny sary tany am-boalohany tamin'ny taona 1930. Ny efitranon'ny hotely dia misy manodidina ny lapan'andriana sy sokajy maro samihafa; ny zava-drehetra manomboka amin'ny efi-trano tokana ka hatramin'ny efitrano sy suite deluxe. Azonao atao ihany koa ny miaina mitokana ao an-tranonao miaraka amin'ny zaridainany, ny fandroana lehibe ary lakozia feno fitaovana. Häringe dia misy toerana mahafinaritra sy tsara tarehy 25 minitra atsimon'ny Stockholm. Eto, mahatsapa lavitra ny tanàna lehibe rehefa mandehandeha amin'ny trano midadasika ianao, eo akaikin'ny nosin'i Nosipodia ary tahiry voajanahary lehibe. Eto dia mora ny mankafy sy miala sasatra.
Ronono kely eo an-toerana ao amin'ny fiangonana Österhaninge, atsimon'ny Stockholm. Mamokatra fromazy mpanao asa tanana amin'ny karazany isan-karazany izahay, manomboka amin'ny fromazy fanosotra tsara ka hatramin'ny fromazy putty somary mafy. Ny anaran'ireo fromazy dia nalaina avy amin'ny toerana ao Haninge - Tyresta, Vendelsö, Åva sy ny hafa. Ny ronono ataonay dia avy amin'ny omby ao amin'ny toeram-pambolen'ny Stegsholm ao Gålö. Manana magazay mamboly misokatra mandavantaona izahay. Jereo ny tranokala amin'izao fotoana izao.
Ny Nordic Trails dia mandamina dia an-bisikileta sy fitsangantsanganana any amin'ny nosin'i Stockholm izay manome anao ny fampahalalana rehetra ilainao hahafahanao mampiasa fialantsasatra mavitrika samirery ao amin'ny natiora tsara sy milamina ary tsy manam-paharoa.
Café Tyresta nataon'i
Any amin'ny valan-javaboary Tyresta. Ao amin'ny fivarotam-bokatra an-trano dia manamboatra fambolena voa faran'izay betsaka araka izay azo atao izahay. Ny dite sy ny kafe dia varotra voajanahary / ara-drariny ihany koa. Hamarininay fa afaka mihinana sy misotro kafe miaraka aminay ny olon-drehetra, mba hahafahanay manolotra zavatra ho anao izay tsy mihinan-kena, vegan, lactose na tsy mahazaka gluten. Tongasoa eto amintsika dia miarahaba an'i Lena miaraka amin'ny mpiasa. Misokatra mandritra ny taona izahay ary manana ny natiora manodidina!
Ao amin'ny biraon'ny fitrandrahana taloha dia misy bara Utö Värdshus sy efitrano fisakafoanana miaraka amin'ny atmosfera an-dranomasina sy an-trano. Eto ianao dia afaka mihinana a la carte na atoandro na sakafo hariva ary misotro ny zava-drehetra manomboka amin'ny kafe ka hatramin'ny champagne. Amin'ny fahavaratra, ny verana ivelany mamiratra dia misokatra hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva ary amin'ny ririnina rehefa milatsaka ny fanala, dia afaka manafana ny tenanao amin'ny sôkôla mafana na divay misolampy eo alohan'ilay afo mikitroka amin'ny sisin-tany ianao.
Ao amin'ny vondronosy atsimon'i Haninge, miaraka amin'i Hårsfjärden any andrefana ary ny helodrano lehibe Mysingen eo ivelany manatrika ny ranomasina, no misy an'i Muskö. Eto, ny tafika an-dranomasina soedoà dia nanana ny fototra iorenany nanomboka tamin'ny taonjato faha-1500 ka hatramin'ny 1967. Ny tobin'ny tafika an-dranomasina goavambe izay manana velarana midadasika toy ny Old Town ao Stockholm dia nipoaka tao anaty vatolampy. Tamin'ny taona 1960 dia nisy tionelina iray naorina teo anelanelan'ny Muskö sy ny tanibe. Ny tionelin'ny fiara dia efa ho 3 kilometatra ny halavany ary mihalalina hatramin'ny 66 metatra ambanin'ny bay. Ao Muskö dia misy tranobe lehibe roa avy amin'ny taonjato faha-1700, Arbottna sy Ludvigsberg.
Ao amin'ny tontolo archipelago mahafinaritra, Almåsa dia manolotra trano amin'ny efitrano tokana na misy doble - misy lavarangana na patio avokoa, ny ankamaroany dia misy fahitana amoron-dranomasina. Ny sakafo hariva dia azo raisina ao an-trano misy manorin-trano na mialoha ny hamandrihana fisakafoanana tsy manam-paharoa ao Svartkrogen (sabotsy voafantina dia tsy maintsy vitaina mialoha), Almåsa dia manolotra hetsika maro isan-taona mandritra ny taona, ho an'ny vondrona sy kaonferansa. Betsaka ny zavatra hita ao Almåsa sy ny manodidina. Manoro hevitra ny mandeha amin'ny natiora izahay, manitrika any anaty ranomasina avy amin'ny morontsiraka sy pier.
Dalarö dia natsangana tamin'ny 1636 ary nandritra ny taona maro dia tobin'ny fadin-tseranana sy mpanamory fiaramanidina, varotra ary seranan-tsambo. Tamin'ny taonjato faha-1800, lasa toeram-pialantsasatra i Dalarö ary fialantsasatra fialantsasatra mahafinaritra ankehitriny, nefa koa teboka manan-danja amin'ny kopia sy vavahady mankany amin'ny nosy atsimo. Strindberg niantso an'i Dalarö vavahady mankamin'ny paradisa. Ao amin'ny nosin'i Dalarö no sambo-dranomasina voaaro indrindra eto an-tany hatramin'ny taonjato faha-1600. Te hiaina azy ireo ve ianao ary hahafantatra bebe kokoa? Namboarinay manokana ny fitsidihana sy fitsidihana sambo sambo ho an'ny tarika kely na lehibe kokoa mandritra ny taona. Antsoy ny 08 - 501 508 00 na ny mailaka info@dalaro.se
Manolotra sakafo sy zava-pisotro miaraka amina fifantohana biolojika izahay ary misafidy ireo akora araky ny fisian'izy ireo ary ny tsara indrindra isaky ny vanim-potoana atolotra. Mandritra ny volana fahavaratra dia misokatra 12.00 - 22.00 isan'andro isika. Mandritra ny ririnina dia manompo an'i Dagens Lunch Mon-Fri 10.30 - 14.00 izahay. Misokatra ihany koa izahay ny zoma sy asabotsy 16.00-22.00. Mamandria mariazy, batemy na fandevenana miaraka aminay. Mikarakara sakafo koa. Tel. 08-501 501 22 Tongasoa tsara!
Trano fandraisam-bahiny Ekuddens
Ekudden no toerana ho anao izay mandamina toby, fampianarana, kaonferansa na fety manokana. Andrahoy ny sakafonao ao an-dakozia malalantsika sy mahafinaritra, manafatra sakafo avy any amin'ny toeram-pambolànan'ny mpifanila vodirindrina aminay sa tianao kokoa ny ho avy ny chef anao handrahoana ny sakafonao eny an-toerana? Miaraka aminay dia mora ny mamandrika sy manao fivoriana arakaraka ny fe-potoana arahinay. Miaraka amin'ny faritra barbecue, sauna, morontsiraka fasika, jetty ary kianja filalaovam-baolina, dia mora ny miaina sy mivelona. Angamba izany no mahatonga ny vahininay hiverina isan-taona! Manolotra safidy izahay toy ny fanadiovana ary koa lambam-panaka sy lamba famaohana ho an'ny famandrihana. Araraoty ihany koa ny fotoana ahafahanao mamandrika ny koveta mafana ataontsika! Manampy izahay
Paosy any aoriana Utö
Miaraka amin'ny atmosfera izay avo kokoa noho ny tànan'nny seranan-tsambo, Bakfickan dia karatra azo antoka ho anao izay noana mozika, fety ary orinasa mahafinaritra. Bakfickan dia misokatra ny asabotsy avy any Valborgsmässoafton ka hatramin'ny faran'ny herinandro voalohany amin'ny volana oktobra sy ny Wed-Sat mandritra ny fahavaratra mafana, ora fanokafana 22-03.
Ankafizo ny sakafo tsara sy ny natiora nosy tsara tarehy, manofa bisikileta na mandeha an-dranomasina. Ny efitranon'ny hotely misy anay dia miorina amin'ny tranobe maro samy hafa, taloha kokoa tamin'ny andro taloha ho toeram-pialana amoron-dranomasina, fa ankehitriny kosa dia misy efitrano sy trano fandraisam-bahiny maoderina sy nohavaozina misy fandroana, WC, telefaona ary fahitalavitra. Mafana sy milamina ny efitrano ary voafidy tsara ny haingon-trano mba hamenoana ny nosy nosy mahafinaritra. Fandriho ny fonosanay mora vidy amin'ny sakafo sy ny hetsika ampifanarahana amin'ny lohataona, fahavaratra sy fararano na mazava ho azy ny latabatra Krismasy sy ny tsenan'ny Krismasy Utö amin'ny volana Desambra. Eo amin'ny havoana mankany Värdshuset no misy ny trano fandraisam-bahiny Skärgården mitazona
Fambolena fianakaviana velona, ​​1km any Gålö. Ao amin'ny familiana tena izy, dia ny cafe sy ny toeram-piompiana fiompiana, izay amidinay hena avy amin'ny biby, omby sy zanak'ondrinay. Mivarotra fromazy vita amin'ny rononinay ihany koa izahay ary koa trondro, tantely sns avy amin'ny mpiara-monina aminay. Mandritra ny taona rehetra dia raisina an-tanan-droa / miompy / mamihina ny biby fiompinay rehetra avy amin'ny bitro kely ka hatramin'ny zanak'omby antonony sy omby / soavaly lehibe. Miarahaba anao ny fianakaviana Borg
Ny Hotel Quality Quality Winn Haninge vaovao dia nohavaozina tanteraka ary nosokafana vao nanomboka ny volana febroary 2017. Tianay ny mandray anao ao amin'ny trano fandraisam-bahiny azo idirana indrindra any Suède sy ny efitrano fandraisam-bahiny any Haninge! Ho hitanao eo afovoan'i Haninge afovoany izahay, 20 minitra fotsiny amin'ny fiaran-dalamby mankany Stockholm C, 10 minitra avy eo Stockholm Fair ary mandeha 1 minitra mankany amin'ny gara gara Handen. Ny trano fandraisam-bahiny dia manana efitrano fandraisam-bahiny voaravaka 119 izay manolotra efi-trano ho an'ny fianakaviana lehibe koa. Miaraka aminay, afaka mijanona hatramin'ny olona enina amin'ny efitrano sasany ianao, tonga lafatra na dia ho an'ny ekipa fanatanjahan-tena aza. Tongasoa isaky ny mety aminao!
Eo afovoan'ny Södertörn tsara tarehy dia misy an'i Fors Gård tamin'ny vanim-potoana Viking. Misokatra mandritra ny taona izahay miaraka amin'ny sekoly mitaingina, mitaingina an-kalamanjana ary lesona tsy miankina amin'ny soavaly Islandy, ary ho an'ireo mpitaingina za-draharaha lesona mahafinaritra amin'ny soavaly Lusitano. Manamboatra fihaonambe, kick-off ary antoko mariazy amin'ny fifandraisana soavaly araka ny faniriana izahay. Ahitana tranobe manan-tantara maromaro ilay toeram-pambolena. Ilay fikosoham-bary taloha tandrifin'ny riaka dia nisy tsofa koa ary tao amin'ireo tranobe tranainy no nipetrahan'ny olona niasa tamin'ny toeram-piompiana. Miarahaba antsika hiantso 08-500 107 89 na handefa mailaka aminay amin'ny bokningen.forsgard@telia.com
Fambolena fianakaviana velona, ​​1km mankany Gålö. Manana omby omby 40 eo ho eo sy omby tanora 80 eo ho eo izahay, izay mitazona ny kiana tsara oaka. Nosy any amin'ny nosin'i Stockholm mahafinaritra. Mandritra ny vanim-potoana fahavaratra dia manana kafe fisakafoanana, trano fivarotan-tsakafo ary trano fisakafoanana izahay. Mipetraha eo amin'ny terrasinay ary mankafy ny fahitana ny saha sy ny hazo terebinta. Tianay ianao hahatsapa ny rivo-piainan'ny fianakaviana ary manantena fa matsiro amin'ny sakafo an-trano sy ny mofo kafe misy anay.
Nåttarö dia manana morontsiraka fasika lehibe indrindra sy tsara indrindra eto amin'ny nosy. Ny fasika goavambe no morontsiraka malaza indrindra fa ny mahafinaritra an'i Skarsand ihany no tena tsara. Ny nosy iray manontolo dia tahiry voajanahary ary afaka manjono ianao, mandeha amin'ny kayak na mandeha an-tongotra any anaty ala majika ary mahita toerana toa an'i Queen's Cave. Misy ihany koa ny làlambe snorkeling misy fambara ao anaty rano momba ny fiainana anaty rano. Ny farany avaratra dia ilay tendrombohitra avo indrindra amin'ny nosy, Bötsudden, miaraka amin'ny fahitana mahafinaritra. Ao Nåttarö dia misy trano fandraisam-bahiny, trano fivarotana, trano bongo, tranolay ary fivarotana any ambanivohitra. Tonga eto Waxholmsbåt avy any Nynäshamn ianao.
Almåsa, Brandbergen Bio Cosmopolite, Dalarö, Fjärdlång nature Reserve, Gålö nature Reserve, Haninge C, Huvudskärsarkipelagen, Häringe Castle, Jordbro, Kymendö, Muskö, Nåttarö, Ornö, Rånö, Reserve Reserve naturel Sandemar, park National national park park, Ålö, Årsta Castle, Öster- ary Västerhaninge
Copyright © 2022 Ny Tema UX
Username na adiresy mailaka *
Adinonao ny tenimiafinao?
Handefasana teny miafina amin'ny adiresy mailakao.
Ny mombamomba anao manokana dia hampiasaina hanatsarana ny traikefanao amin'ny tranokala, hitantanana ny fidirana amin'ny kaontinao sy ho an'ny tanjona hafa voalaza ao aminay politika Fiarovana fiainan'olona.